Uma thina inkulumo mayelana ethandwa kakhulu European zokungcebeleka, abaningi izivakashi ezifika engqondweni Greece, okungukuthi, yayo ingxenye yesiqhingi. Ngemva esiqhingini ngasinye - umlando eliyingqayizivele, izinto ezithakazelisayo futhi yebo angu-emabhishi amahle. Mhlawumbe omunye edume kakhulu yile okuthiwa esiqhingini saseKrethe, okuyinto minyaka yonke uthola izinkulungwane zezivakashi. Lokhu okungukuthi lapho ihhotela itholakala Ilios Malia Apartments 3 *, lapho ngokuvamile ube kokusebenza indawo izihambi.
Yiqiniso, uma uhlela kubalulekile ukuhlola ulwazi olusemthethweni ukuze ehhotela, kanye bajwayelane imibono izivakashi abaye kakade wakwazi ukuchitha kwezinsuku ezimbalwa khona.
Ingqalasizinda futhi indawo ehhotela
Small, ihhotela ethokomele Ilios Malia Apartments 3 * itholakala ngaphandle nje maphakathi olunothile resort edolobheni Malia. Ngezinye uhamba ibanga kusuka emabhasini omphakathi, kanye izitolo eziningi nezindawo zokudlela ezinhle. By the way, ogwini kungabuye ufinyelelwe emva kwamaminithi ambalwa.
Ihhotela yakhiwe isakhiwo yesimanje ezintathu storey, ngenhlanhla, isanda elilungisiwe. Maphakathi begceke lokubhukuda. indawo Ihhotela, nakuba amancane, kodwa kulungisile kahle. Futhi ngaso sonke isikhathi neso olumnandi izimbali nezihlahla, imithi emide kanye nemibala egqamile.
Ihhotela Ilios Malia Apartments 3 * (Heraklion, Malia): izithombe kanye nokwaziswa okuphathelene igumbi
Ihhotela siqukethe 54 amakamelo - zikhona amakamelo ejwayelekile, amakamelo ekilasini ngokunethezeka "aphakeme ', kanye zokuhlala, okuyinto aqukethe lokulala kanye negumbi lokuhlala nge ifenisha wokudonsa phandle. Interior design, neqondayo futhi ezimnandi. Kusukela akho kuvulandi ungakwazi ukujabulela ukubukwa yensimu nasezindaweni ezizungeze, ukuphefumula fresh air.
Igumbi ngalinye has ekhishini ayo, lapho kukhona zonke izitsha kanye, yebo, usule izinto zikagesi eziphezu (into yokucocobalisa, imethrikhi, iketela kagesi nesitofu esincane) ukupheka ukuthi izivakashi eziningi kubalulekile. Yiqiniso, igumbi Ubuye konke ukuqinisekisa esiphezulu nenduduzo, okubala air conditioning, ephephile, TV ngisho encane esiqandisini. Indlu yangasese izici wesimanje amapayipi zalapho, izimonyo eliphezulu kanye amathawula, okuyinto ngenza nsuku zonke.
Nutrition: Lokho ongakulindela lodger?
Njengoba ukudla iyingxenye holidi, kulokhu-ke kumele kulungiselelwe kusenesikhathi. Lokho kungaba ukunikela izivakashi zayo ihhotela Ilios Malia Aphathimenti Crete 3 *? Lapha has yokudlela ayo, lapho izivakashi zihlale zamukelekile. Iningi izivakashi uncamela ukhokhe kusengaphambili kuphela sasekuseni, okuyinto kwamukelwa futhi kwenziwe ngesimo a lezitsha. Imenyu izitsha ezinhle, fresh and esihlwabusayo.
Ezinye izindaba zika-suku, izivakashi zingathola nezinto udle yokudlela ehhotela. Ibhayisikobho yezimanga pre-pay scheme "zonke okufakayo" noma ukhokhe akhawunti esidlweni ngasinye. Ukudla kwasemini kanye dinner iphekwe oda, linikeza hhayi kuphela cuisine kwamazinga amazwe ngamazwe, kodwa futhi lesi siqhingi futhi izitsha iMedithera. Kodwa nokho kukhona bar lapho Uhla lwamanani - wendawo iziphuzo, Cocktails, ikhofi, ehla fresh futhi ukukhanya Ungadla.
Yiqiniso, ungaba isidlo nangaphandle ehhotela kungabikho izinkinga, njengoba endaweni yokungcebeleka uhlale eziningi amathilomu olunothile esiqhingini taverna.
Izinsiza zokuzivoxavoxa ngasolwandle
Yini bangalindela izivakashi onquma ukuba ngihlale Ilios Malia Apartments 3 *? Crete - isiqhingi idume amabhishi amahle, isimo sezulu layo elimnandi nasemanzini. Eliseduze lolwandle zomphakathi kuyinto indlela elula - indlela kuzothatha Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu engu-10.
Abavakashi ukukhuluma kahle ngale ndawo, ngoba kukhona enhle ngempela futhi ihlanzekile, futhi amanzi uzolile futhi umnyango ulwandle ngokuphelele usule zamatshe. Njengoba leli bhishi ingeyokusetshenziswa zomphakathi, ngezinye izikhathi uya eziningi abantu. Ukusetshenziswa sunbeds futhi emphemeni izihlalo, yebo, ukuthi ikhokhwe owengeziwe. Futhi ogwini kukhona yokucima ukoma, lapho ungakhululeka emthunzini udle.
Yiqiniso, ungaba fun ukudlala i-volleyball yasolwandle, ugibele izikebhe, motor izikebhe Ukushushuluza amanzi, windsurfing, uzama yena diving kanye ngomkhumbi - uhla egcwele ukuzijabulisa enikeziwe kwezivakashi.
Ingabe ukubala kumasevisi ezengeziwe?
A ukuhlala kwelinye lamakamelo at Ilios Malia Apartments 3 *, yebo ningaqiniseka ukuthi ezinye izinsiza ezengeziwe. Insimu has yokupaka isikhala ayo, okuyinto izivakashi ungasebenzisa mahhala (edolobheni angaba inqola aqashiwe kalula bese uthatha uhambo azungeze lesi siqhingi).
Ihhotela okungukuthi kalula kungenzeka uhlobo lwemali, i-exchange rate okungukuthi cishe iyafana emzini. Cishe yonke indawo on ensimini ehhotela kukhona Wi-Fi, ukuze ukwazi ukuxhuma kwi-World Wide Web nganoma yisiphi isikhathi. By the way, inkonzo yakho, futhi ekhoneni computer, lapho uyokwazi ukusebenzisa imishini ihhovisi kanye laptop.
Ihhotela Ilios Malia Apartments 3 * (iGreece, Heraklion, Malia): ukuzijabulisa nokungcebeleka izihambi
Njengoba nokubuyekezwa, izivakashi anesizotha eyenziwa ehhotela kuphela ingxenye encane ngosuku, wakhetha uphumule ebhishi bese hlola isiqhingi. Noma kunjalo, endaweni Ilios Malia Apartments 3 *, ungakwazi bazijabulise. Njengoba sekushiwo, ngendlela ehlanzekile, fresh amanzi egcekeni ifakwe pool ivulekile. Kuyinto ndawo idume izivakashi, lapho baphumule, ukubhukuda, bethamele ilanga, ukuxoxa futhi umane bengidlala, ikakhulukazi uma siye ebhishi hhayi kwemizwa. Eduze eziningi ezanele ibekwe imibhede ububanzi nge omatilasi ezithambile nezambulela, umthunzi lapho ukufihla.
Lapha, endaweni evulekile ifakwe Jacuzzi ezinkulu - round pool ifakwe hydromassage uhlelo enamandla futhi uphumule lapha ungakwazi khulula. Ungadlulisela isikhathi itafula pool. Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi bayamenywa ukuba bar, lapho ungakwazi dance ngisho ukucula i-karaoke.
Ungakhohlwa mayelana izinto lingasempumalanga yalesi siqhingi, ngemva Crete - akusiyo nje amabhishi namahhotela. Kukhona inala iminyuziyamu, imivubukulo, uhlala amathempeli lasendulo. Kafushane, kulesi siqhingi - indawo ephelele indawo iholide, futhi uhambo ezithakazelisayo angathengwa ngqo ehhotela, lendawo ukuvakasha edeskini, igcwele abasebenzi abanolwazi futhi benobungane.
iholide Umkhaya: izimo izingane
Abazali abahlose ukuchitha iholide nezingane, kancane nentshisekelo kwezinye izindaba, njengoba uma uhamba nengane at induduzo ngaphambili. Ihhotela Ilios Malia Apartments 3 * ngokuvamile iba yindawo ngemindeni nezingane. Njengoba kushiwo lapha ukunikela amafulethi ivulekile, imikhaya nengane ukulingana kahle.
Ngaphezu kwalokho, ngesicelo egumbini njalo ukuletha rollaway embhedeni kumatilasi esithambile. Esikhathini yokudlela wendawo, ungathola njalo okuthile okuhle ukudla umntwana, futhi kukhona eziningi izitolo ezidayisa ingane ukudla. Ukuze uthole okwengeziwe Imali, ungakwazi ushiye ingane okwesikhashana zilaliswe umzanyana. Futhi izingane egcekeni ifakwe yokubhukuda - ke okungukuthi banzi ngokwanele amageyimu, kodwa engajulile futhi iphephile, futhi amanzi okungukuthi njalo kahle evuthayo futhi izinguquko njalo. Edolobheni kukhona ezindaweni eziningi lapho nezingane zabo bonke ubudala zingaba nobumnandi futhi uthole okuningi injabulo.
Indlela phendula wangaphambili izivakashi?
Ngokuqinisekile wonke izivakashi, uya eholidini, unesithakazelo Imininingwane hhayi kuphela olusemthethweni, kodwa futhi imibono izakhamizi wangaphambili. Yini abantu bathini mayelana Ihhotela Ilios Malia Apartments 3 *? Izibuyekezo ingxenye enkulu omuhle, ngoba ekhala akuyona kakhulu ke. Le ndawo hhotela enhle ngempela, futhi amakamelo zazikhululeka - amnandi ukuze baphumule. I inzuzo enkulu kuba ekhishini ayo, nakuba yokudlela wendawo ukudla muhle.
Abasebenzi Ilandela futhi ethobekile, kungalindeleka usizo lwabo nganoma isiphi isikhathi sosuku (ezinye zezisebenzi baqonde kahle isiRashiya). A ungakhululekile kancane kubhekwa ibanga elikhulu kuya ebhishi, nakuba iningi izivakashi into ngokumelene izizinda nsuku zonke. Leli hhotela ekahle okuphumuzayo beach iholide, futhi amanani lapha, endleleni, idili enhle. abahambi Abaningi ngisho babe amakhasimende avamile, futhi lokhu kufakazela ukuthi abantu okusezingeni eliphezulu service quality.
Greece, Julia Ihhotela 3 *: izithombe kanye nokubuyekeza
Orchid - imbali kudinga ukunakekelwa